Glutaral na Deciquam
Ntaneti n’afọ 2019 gabigara nyocha nke GMP nke mba Ethiopia
Site na October 21 ruo 23, 2019, Hebei Depond nakweere nnabata na nnabata nke Ministry of Agriculture of Ethiopia. Ndị otu nyocha ahụ gafere nyocha ụbọchị atọ ahụ na nyocha akwụkwọ, wee kwenye na Hebei Depond mezuru ihe njikwa njikwa WHO-GMP nke Minista Mmekọ ...
Ntaneti n’afọ 2019 gabigara nyocha nke GMP nke mba
Site na Ọktọba 19 ruo 20, 2019, ndị ọrụ nlekọta GMP ọkachamara na ngalaba Hebei rụrụ ọrụ nyocha GMP nke afọ 5 na Nnọchi, Hebei, yana ntinye aka nke ndị isi obodo, ndị isi ọchịchị na ndị isi mpaghara na ndị ọkachamara. Na nzukọ ekele, Maazị Ye Chao, gen…
Afọ nke afọ 2019 na China International Animal Husbandry Expo-Wuhan
Na Mee 18, 2019, ụbọchị 17 (2019) China Animal Husbandry Expo na 2019 China International Animal Husbandry Expo mepere na Wuhan International Expo Center. Site na ebumnuche na ebumnuche nke ihe ohuru na-eduga mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, Animal Husbandry Expo ga-egosipụta ma kwalite lat ...
Nlekọta nke afọ 2019 gafere nyocha nke Sudan GMP
Site na Dec 15 ruo 19, 2019, Hebei Depond nakweere nnabata na nnabata nke Ministry of Agriculture of Sudan. Ndị otu nyocha ahụ gafere ụbọchị anọ na nyocha saịtị ahụ na nyocha akwụkwọ, wee kwenye na Hebei Depond mezuru ihe njikwa njikwa WHO-GMP nke Minista Mmekọ…
Agbanyeghị na 2019 Russia International Animal Di Di Expo
Na Mee 28-30, 2019, a na-eme Expo anụ ụlọ nke mba ofesi na Moscow, Russia, a na-ejide expo ahụ nke ọma na Nnọkọ Mgbakọ na Ngosi nke Moscow krokus. Ihe ngosi ahụ were ụbọchị atọ. Ihe karịrị ndị ngosi 300 na ihe karịrị 6000 ndị zụrụ ahịa gara gara…
Onddabere na 2019 Thailand VIV Asia - Bangkok
Kemgbe 1991, a na-enwe VIV Asia otu ugboro n'afọ abụọ. Ka ọ dị ugbu a, o meela nzukọ iri na asaa. Ihe ngosi a kpuchitere ezì, ulo ozuzu okuko, ehi, ahihia na umu anumanu ndi ozo, teknụzụ na ọrụ dị n'akụkụ niile nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na “iri nri”.
Agbanye n’afọ 2019 Bangladesh International Animal Husbandry Expo
Na Machị 7-9, Hebei Depond sonyere na Expo Bangladesh International Animal Husbandry Expo nke afọ 2019, nke bụ nnukwu ihe ịga nke ọma ma nweta ọtụtụ. Bangladesh bu otu n’ime ahia mbu na ahia ugbo na anumanu di nma n’ahota. Iji meziwanye asọmpi nke ịkọ ...
Onddabere na VIV Nanjing 2018
Site na Septemba 17 ruo 19, emere ihe ngosipụta anụ ụlọ nke anụmanụ China na Nanjing, bụ isi obodo China oge ochie. Dika oke ikuku nke ulo oru umu anumanu na ebe nnabata ndi mmadu, ihe kariri ngbako 500 na anabataghi nke ndi…
Nwaafọ 2018 nke iri na isii China International Animal Husbandry Expo-Chongqing
Na Mee 18, ụbọchị 16 (2018) China mepere Animal Husbandry Expo mepere emepe na Chongqing International Expo Center. Ihe ngosi ahụ niile were ụbọchị atọ. Na ebe ngosi nke puku mita 200000, ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na ndị si mba ọzọ gbakọtara ebe a. N'oge Anụmanụ di ...
Agbanyeghị na ịgafe Libya GMP nyocha na 2018
Site na March 24 ruo 26, 2018, Hebei Depond nakweere nyocha nke Ministri nke ọrụ ugbo nke Libya. Ndị otu nyocha ahụ gafere nyocha ụbọchị atọ na nyocha saịtị ahụ ma kwenye na Hebei Depond mezuru ihe ndị chọrọ WHO-GMP, ma nye nyocha dị elu nke Hebei Depond. Ihe a…
Omume afọ 2018 na ngosipụta ala ubi Kazakhstan nke 14-Astana
Ndi ụlọ ọrụ ihe nlere anya nke mba uwa bu TNT hiwere ulo ngosi ihe ngosi nke oru ugbo ala nke United States, ma ewerekwa ya nke oma ugboro 13. N ’ihe ngosi a na-eme kwa afọ, ndị na-egosi ihe sitere n’ụwa niile na-arụ ọrụ ugbo, agrochemical na anụ ụlọ ...
Ndoputa nke 2017 na Pakistan Pakistan Animal Husbandry Expo-Lahore
Site na August 24 ruo 26, 2017, emere ememe anụ ụlọ isii nke mba Pakistan ihe na Lahore. Hebei Depond mere ọhụụ dị egwu na anụ ọkụkọ Pakistan Expo, n'oge nke akụkọ akụkọ mpaghara gbara ya ajụjụ ọnụ. Hebei Depond, dị ka ụlọ ọrụ anụmanụ na ụlọ ọrụ ọgwụ na China, w ...
No.8 Shuangtong Road, district Luquan, obodo Shijiazhuang, Hebei, China